ဥပဒေ ကိုသိရန်မလိုသလို၊လိုက်နာရန်မလိုသော တောင်ကုတ်မြို့ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ဥပဒေ ကိုသိရန်မလိုသလို၊လိုက်နာရန်မလိုသော တောင်ကုတ်မြို့
ဥပဒေ ကိုသိရန်မလိုသလို၊လိုက်နာရန်မလိုသော တောင်ကုတ်မြို့
Posted by ရခိုင့်သွီးချေ on Jul 28, 2012 in Creative Writing | 13 comments
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ဇွန်လ(၃)ရက်နေ့ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော ခရီးသွားပြည်သူ(၁၀)ဦး
ကားပေါ်မှ ဆွဲချအသတ်ခံခဲ့ရသည်ကို သိပြီးဖြစ်သည်။ထိုမြို့သည် မှောင်ခိုရောင်း
တောင်ကုတ်မြို့တွင် လိုင်စင်မဲ့ မော်တော်ကားများ မြောက်မြားစွာကို လမ်းများပေါ်
ဥဒဟိုသွားလာနေသည်။တောင်ကုတ်မှ ပြည်နယ်တွင်းရှိမြို့များ အားလုံး၊ပြည်မပါ
မကျန် ပေါ်တင်သွားလာနေကြသည်။ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဟု အကြောင်းပြကာ မှောင်ခို
ရာဇာတစ်ဦးဖြစ်သော ဦးဦးကျောက်တောင်မှ အာမခံကာ ဝယ်ယူမောင်းနှင်နေကြ
ခြင်းဖြစ်သည်။အဆိုပါ မူးယစ်မှောင်ခို သည် မန္တလေး၊ရှမ်းပြည် တို့ ဖက်မှ လက်ဘက်
ခြောက်များ တင်သွင်းပုံစံဖြင့် မူးယစ်ဆေးဝါးများပါ သယ်ယူနေသည်။ထို့ အတွက်
ဦးအောင်သောင်း၊သီဟသူရ တင်အောင်မြင့်ဦးတို့ လို လူကြီးများဖြင့် ပူးပေါင်းကာ
တောင်ကုတ်မြို့ လိုင်စင်မဲ့ ကားများ အလွန်များပြားလာသည့်အတွက် လိုင်စင်ရှိကား
ယခုကဲ့သို့ လိုင်စင်မဲ့ ကားများဖြင့် ဥပဒေမဲ့ မှောင်ခိုလုပ်ငန်းများ ကြီးစိုးနေသောထိုမြို့
သို့မေးလ်ပို့ တိုင်ကြားသွားမည်။
View all posts by ရခိုင့်သွီးချေ →
ဟုတ်လဲ ဟုတ်ဘဲနဲ့ ကုလားကျင့် ကုလားကြံ ကြံနေခြင်း
ကုလားများကို တောင်ကုတ်က လက်မခံသောကြောင့် အမုန်းပွါး အတို့အထောင်လုပ်ခြင်း
နွားလို့Nadi Mg ဆိုတဲ့အကောင်ရေ ဒီလောက်နေခင်ကြောင်းတောင်တောင်မှဘာမှရန်ငြိုးမရှိဘဲရက်ရက်
စက်စက် လူ(၁၀)ယောက်ကိုသတ်ထားတာ ကို ပေါက်ကရပြန်ပြောနေတာရှက်ဖိုကောင်းနေပြီး ၊မြို့သိက္ခာ ကျသွားပြီးးအနက်ရောင်နယ်မြေ လူဆိုးသူခိုးများ၊လူသတ်သမားများနေသောမြို့ဆိုတာပေါ်လွင်ထင်
ရှားသွားပြီ၊ရခိုင်မှတရားမရှိ ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုလုပ်ချင်တိုင်းလုပ်လိုရတာ ပေါ်လွင်ထင်ရှားသွားပြီ
မြို့ကလေးစဇီးစေ့လောက်သာရှိပါသည်။ ကျောက်နီမော်ကိစ္စတုံးက မွတ်ဆလင်တွေကိုယ်တိုင်ဝိုင်း
ဖမ်းပေးတာပါ တရားခံကို၊အခု တောင်ကုတ်သူတို့မြို့မှ ဖြစ်တာမြို့ ပျက်သွားနိုင်တာသိရဲ့နဲ့လုပ်
ကိုင်ခြင်းသည် သူတို့ ကိုယ်တိုင်ပါဝင်နေသောကြောင့်သာဖြစ်သည်။ အခင်းဖြစ်နေ့နံနက်က
တရားဝင်ဝေထားတာပါ။RNDP ပါတီနဲ့ သာသနနုဂ္ဂဟအဖွဲ့တို့ပါဝေနေတာပါ။ လူတိုင်းသိပါတယ်၊
တောင်ကုတ်အမတ်စံလှိုင်ကိုမေးရင်တောင်ရပါသည်၊ သူဘဲ သွားဆွေးနွေးသေးတယ်လို့ဝန်
ခံထားတာ၊ဘယ်သူဆီကိုသွားဆွေးနွေးရမယ်ဆိုတာသိတာလူကိုသိလို့၊နေရာကိုသိလို့ပေါ့ ငတုံးတွေရေ ။ခရီးသည်ကားမှာလဲ တောင်ကုတ်မှ နေခဲ့သော ပို့ဆက်ဝန်ထမ်းဆိုလူကအစအ
ကုန် သိပါသည်။ ရအောင်မစုံစမ်းနိုင်သည်မှာ ညံ့ဖြင့်လွန်းအားကြီးသဖြင့်သာဖြစ်သည်.။
များမျက်စိရှေမှောက်တွင် လူသတ်နေသည်ကို သက်သေမရှိဆိုသည်မှာလူရယ်ဖွယ်ရာဖြစ်သည်။
လူမိုက်များညီတော့ တရားခံရှာမရတဲ့ ၊လူမိုက်တွေကမပေါ်အောင်အားလုံးဝိုင်းသတ်ခိုင်းတော့
သူဖေါ်ရင်ကိုယ်ပါပါမယ်ဆိုတော့ နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးရေ ရခိုင်မှာဥပဒေမရှိတော့ဘူးလို့ကြေ
သမ္မတကြီးကကောအစီရင်ခံစာလေးဘဲဖတ်ပြီး နုတ်ပိတ်နေပြီလား .ထိထိရောက်ရောက်အရေးယူမပေး တော့ဘူးလား နောက်ဖြစ်တဲ့ရသေ့တောင် မှာသူတို့ရွာကို
လာမီးရှိတဲ့ သူတွေကိုသတ်တဲ့ညဖက်ဖြစ်တဲ့လူသတ်မှုမှာတော့ ရက်ပိုင်းမှာဘဲ ရွာရှိမွတ်ဆလင်
ကကျတော့သက်သေမပေါ်လို့ လူသေမှုအဖြစ်အမှုပြောင်းပြီးအမှုပိတ်မယ်တဲ့ တကယ်လူရယ်စရာ
ခရီးသွားများရှောင်ရှားကြပါရန် နှင့်ထို့မြို့သည်ခရီးလမ်းဆုံတွင်ရှိနေသောကြောင့် လမ်းပေါ်
မှဖယ်ရှားရန် အတွက် ၀ိုင်းဝန်တောင်းဆိုကြပါရန် အသိပေးလိုက်ပါသည်။
aung myatko says:
ဝက်ဆီဖတ်နဲ့ ချီး နယ်စားပြမှယုံမယ် သံတွဲစကား ဘယ်သူမှ မယုံဘူးရယ်
ပိုး သတ်ဆေး says:
ဟီဟိ မေးပို့တိုင်ကြားမယ်တဲ့။ အဲဒီလိုဆို ပစ်စာဖြစ်သွားမှာပေါ့။ ပစ်စာကိုဘယ်သူကများအရေးတယူဆောင်ရွက်မှာတဲ့လဲ ။ နေပြည်တော်ကလူကြီးတွေကိုခေါ်ပြီး ကိုယ့်လူကိုယ်တိုင် တောင်ကုတ်ကိုလိုက်သွားပြီး လက်ညှိုးထိုးပြပြီးတိုင်ရင်တော့ ချက်ချင်းအရေးယူမလားပဲ။ တစ်ကယ်ပြောတာ တောင်ကုတ်ကိုသွားလိုက်ပါ။ အကောင်းဆုံးအကြံပေးတာ။
ခြုံပုတ်ထဲက ဟောင်နေတာ သိကြတဲ့ အတိုင်းပါဘဲ ၊
သူတို့တွေက တောင်ကုတ်ဟေ့ အသံကြားတာနဲ့ တဆပ်ဆပ်တုန် စောင်ခြုံ ချီးပန်း နေတော့တာ ၊
အကျင့်ယုတ် လက်သီးပုန်းထိုးတဲ့အဆင့်ပါ ။
This reckless/brainless son of the bitch and grandson of the pig is still posting bullshit on MG with the name of Rakhine Blood. Show your real identity if you have balls instead of using the name as Rakhine Blood.
အမျိုးသားရေးဆိုတော့ ဝင်ပြောသင့်တယ် ထင်လို့ပါ
စာရဲ့ရေးသားတင်ပြပုံဟာ ခိုင်မာမှုမရှိပါဘူး( invalid )ဖြစ်နေပါတယ်
ဒဿနအမြင်နဲ့ပြောရရင် ယုတ်တိမတန်ဘူး၊ညိညွတ်မျှတမှူ မရှိဘူး
ဒါကြောင့် ယုံမယ်ဆိုရင် ချင့်ချိန်ပါလို
ဘာပဲပြောပြော သမ္မတရုံးလိပ်စာလေး သိလိုက်ရလို့ ၀င်ဖတ်မိတာ အကျိုးမရှိဘူးလို့ မမြင်မိကြောင်းပါ…..။
တိုင်မယ်ဆိုလဲ တိုင်ဗျာ။ ခုတော့ပစ်စာလိုလိုဘာလိုလိုနဲ့ ဒီမှာလာဖွမနေနဲ့။ တိုင်ဖို့ကိုများဒီမှာလာပြီးပြော နေရသေးတယ်။ အာရုံနောက်လာပြီ
ရူး နေတဲ့သူတင်တဲ့ ပိုစ်လို့ ဘဲ သဘောထား လိုက်တော့မယ် ဘင်ဂလီ မယား ပါ သား ရေ သူ့ အမျိုးတွေ သူများ အိမ် လာ နေ ပြီး အိမ်ရှင့်သမီး ကို မုဒိမ်းကျင့် အိမ် မီးရှို့ လူသတ်တာတော့ မမြင်ဘူး သူ့ အဖေ တွေ သေတာ ဘဲ မြင် ကြတယ်
ကလီးရယ် မင်းနှယ့်ကြည့်ရတာလက်ညောင်းလိုက်တာ ဘယ်သူမှလဲေ-ာက်ဖက်တောင်
;-) လောလောဆယ်တော့အင်တာနက်ဖိုးတော့ဆုံးပီး။မင်းကွန်မန်.က ၅ မိနစ်လောက်တော့
ကြာမှာဘဲ စဉ်းစားတာရယ်ရေးတာရယ် ၁၀၀ဖိုးတော့ဆုံးဘီဟ :-)
အဲဒီမန့်ကြီးက save လုပ်ထားပြီး ပြန်ကူးချနေတာဗျ
သူပြောတဲ့အတိုင်း မြန်မာတစ်ပြည်လုံးတောင်ကုတ်လို အမဲရောင်နယ်မြေဖြစ်သွားရင်ကောင်းသား